မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths III | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths III
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths III
ဖြစ်ခဲ့သလား သို့တည်းမဟုတ် ဖြစ်နိုင်မလား
ရစ်တာ ၂ ဆို သိတောင်မသိလိုက်နိုင် ရစ်တာမှတ် စက်ကဘဲအနည်းငယ်လှုပ်
ရစ်တာ ၄ မှ ၆ က လဘက်ရည်ခွက်ကရေ လှိုင်းဂယက်လေး
ရစ်တာ ၆ ဆို အိမ်တွေအက်ကြောင်းပေါ်
စစ်ကိုင်း ငလျင်ကျောဟာ တဆက်ထဲ မဟုတ်
အုံကြွ ပေါက်ကွဲ တာမရှိ ငလျင်အားလဲသေးသိမ်ပြီးဖြစ်ခဲ၊
အလှမ်းဝေး ၆၂ မိုင် မှ ၁၃၄ မိုင် ရှိ မိုးကောင်း နဲ့
ကမိုင်း ပိုင်းလေးမှာ ၁၉၃၁ တုံး ကတကြိမ်
ဘဲ ရစ်တာ ၇.၆ ဖြစ်ခဲ့ပြီး
အမေရိကန်မြေငလျင်ဌာန မှ အနှစ် ၁၁၆ ကာလ အတွင်း
မြစ်ဆုံ တဝှိုက် မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်မြေပုံပါ၊
၁၁၆ နှစ်ကျော် အတွင်းမှာ ၂ ကြိမ်သာ၊
၁၉၆၂ တကြိမ် ၁၉၂၉ ထကြိမ်
ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂ကြိမ်စလုံး ရစ်တာ ၆. ၃ နဲ့
၆၂ မိုင်ကျော်ေဝးတယ် ဆိုတော့ဘေးဥပါဒ်မရှိပါ၊
မြစ်ဆုံထက်နေပြည်တော် က စိုးရိမ်ရတယ်လို့
အခုခေတ်အခြေအနေမှာ.. မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကသာ.. ကန့်ကွက်သူမရှိ.. စထားပြီးဆိုရင်.. အခုဖြစ်နေသမျှ.. မိုးသီးကြွေ..ရေရှား.. ရေကြီးအကုန်လက်ညိုးထိုးပြစရာဖြစ်နေမှာကိုလည်း.. မြင်ယောင်မိသေး..။
.မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လက်ခံလိုက်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တာဟာ မြန်မာပြည်အနာဂတ်အတွက် ဆုလာဘ်တစ်ခု လို့….. ၆ဝ % လောက် သေချာရင်တော့….
ဒါပေမဲ့ဘယ်အရင်းအမြစ်ကလှ ျပ်စစ်ထုတ်သင့်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတာတော့ခ ျပြသင့်တယ်
ပိုက်ဆံရှိသူကကားစီးနေခ ျိန်မရှိသူကအငှါးကားစီးလမ်းလှေ ျာက်တာဘာမှပြောစရာမလို